AKHRISO:- Maxaad Kala Socotaa Istaraatiijiyada Weerarrada Alshabaab iyo Marxaladihii Ay Soo Mareen? (Xog) – War La Helaa Talo La Helaa
By Jiinoow	 On Jan 10, 2018
Kooxda Shabaab ayaa ka dagaallamaya gudaha Somaaliya tan iyo sannadkii 2007-dii, waana muddo 11-sanno ku siman oo uu halggankooda qar iskatuurnimada uu socdo.
Haddaba kooxdaas waxa ay weerarradooda ku bilaabeen qaab ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, waxaana ay ahaayeen dhallinyaro lasoo qaldday oo bambbooyinka gacanta ku tuuri jiray goobaha iyo saldhigyada dowladda ay ku lahaayeen Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Waxaa xigay in ay xoogeystaan. hub, iyo saannad militeri ayeey gacanta ku dhigeen, kaddib waxaa bilowday dagaallo fool ka fool ah, oo u dhaxeeya labada dhinac.
Muddo ka dib waxa ay gacanta ku dhigeen qeybo badan oo kamid ah gudaha Soomaaliya, taas waxa ay u sahashay in ay helaan ciidan iyo dhallinyaro badan oo daacad ah.
Waxaa raacay in dowladda Soomaaliya ay ka adkaato kooxdaas oo ay ka saaraan magaalada Muqdisho, wixii intaas ka dambeeyay kooxdaas waxa ay bilaabeen qorshayaal dabar goysmo ah, kaas oo lagu doonayay in ay ku tirtiraan ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa bilowday is qarxin iyo naftii halignimo. waa marka ay naceen 80%-kiiba ummadda Soomaaliyeed, tobanaan kun oo Soomaali ayaa ku maqan is qarxinta Shabaab, halka kuwa kalana ay hadda sugayaan in ay ku dhintaan qaraxyada Shabaab ay maleegayaan.
Wixii ka dambeeyay 2014-kii, shabaab weerarro badan kuma qaadin goobaha dowladda ay maamusho, oo waxaa u dambeysay weerarkii lagu galay xarunta Baarlamaanka ee Villa Hargeysa.
Maalinkaas wixii ka dambeeyay ma jirin weerar ay ku qaadeen xarun dowladeed oo ku taallay Muqdisho, marka laga reebo weerarro nacasnimo ah oo bambbooyinka gacanta ah oo ay ku qaadayeen goobo kamid ah magaalada saldhigyada ku yaalla.
Haddaba maalinkaas, marka laga soo bilaabo Shabaab iyo dowladda waxa ay u ekaayeen kuwa heshiiyay oo raalli ka ah in ay iska qaleeyaan, oo aysan is aadin baddalkana la beegsado goobaha ganacsi.
Waxaa u dambeysay in istaraatiijiyada weerar ee shabaab loo baddalo lacag ka sameyn; oo waxa ay bartilmaameed ka dhigteen goobaha ganacsi, Shirkadaha ganacsi, carwooyinka, maqaayadaha, Hoteellada iyo hey’adaha ayaa bartilmaameedkoodu yahay.
Waa istaraatiijiyad lacag lagu sameynayo, ganacsadaha waxaa laga codsanayaa in uu bixiyo lacagaha ay ku sheegaan Zakawaadka, ha yeeshee ninkii diida wuxuu la kulmayaa weerar adag oo dhanka kooxdaas kaga imaada.
Ugu dambeyn beryihii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay qaraxyada iyo weerarrada hoose ee ka dhacayay magaalada, waana mid kamid ah istaraatiijiyada dagaal ee kooxda shabaab.
Ma Dhabbaa In Dowladda Ay Diyaarisay Ciidan Cusub, Howsha Ay Qaban Doonaan se Maxay Tahay?